Ambositra - Wikipedia
20°31′49″S 47°14′36″E﻿ / ﻿20.530340°S 47.243440°E﻿ / -20.530340; 47.243440
I Ambositra dia kaominina malagasy ao amin'ny distrikan'Ambositra. Renivohitry ny sikotra sy ny asatanana Ambositra. Ao no anamboarana ireo sikotra Zafimaniry. Mamboly vary ny faritra. Fomba fiteny ny hoe : "Resak'Ambositra tsa ho lany", ilazàna fa mandray olona Ambositra sady tsara fihavanana amin'ny olona rehetra, tsy mankahala vahiny fa mora havanina. Betsileo ny ankabeazan'ny mponina.
1 Ny niorenan'ny tanàna
2.1 Toetany, zavamaniry, fambolena
4.1 Fampianarana sy fanabeazana
4.2 Fivavahana ao Ambositra
4.2.1 Ny finoana katôlika
Ny niorenan'ny tanàna[hanova | hanova ny fango]
Efa tanàna Ambositra tamin'ny faha-mpanjaka. Misy toerana atao hoe eny amin'ny Rova, ery andrefan'Ambositra ery.dc Mety tamin'ny fanjanahan-tany no tena nifindran'ny tanàna ety ambany manana an'i Vinany ho renivohitra misy ny biraom-panjakana samihafa. Misy tantarany koa ny anarana hoe Ambositra. Toa hoe be omby vositra, hono, tamin'ity faritra ity ka lasa Ambositra (ho hamarinina).
Toetany, zavamaniry, fambolena[hanova | hanova ny fango]
Mizara ny toe-tany iombonany amin'ny Afovoan-tany rehetra Ambositra. Ny hazo kininina sy ny kesika no betsaka maniry ao Ambositra. Mety amin'ny fambolena vary ny tany. Tsy dia tena mamokatra ny tanety na mamboly vomanga sy mangahazo, katsaka sy tsaramaso sy voanjo aza ny olona. Tsy misy ala voajanahary intsony. Fotoana mahabe ny orana ny Nôvambra hatramin'ny Marsa; mangatsiaka sy meri-dava ny Avrily hatramin'ny Aogositra; main-tany tanteraka kosa ny Septambra hatramin'ny Oktôbra.
Ny vokatry ny tantsaha no mamelona ny toekaren'Ambositra. Avy any Ihadilalana no miavy ny voamaina sy ny vary; avy any Ambinanindrano sy Imady ny "rianala"; avy any Andina ny voasary. Samy manana ny vokatra mampiavaka azy moa ny Kaominina manodidina. Ny ankoatr'ireo dia mifototra amin'ny varotra sy ny asatanana.
Maro ny vahiny avy amin'ny firenen-tsamihafa no mandalo ao Ambositra hizaha tany. Ireo entana vokatry ny asatanana, sikotra Zafimaniry no tena tsidihin'ny vazaha ao Ambositra tanàna. Any amin'ny faritra Antoetra sy Zafimaniry kosa no misy ireo hazoala sy biby mampiavaka an'Ambositra.
Fampianarana sy fanabeazana[hanova | hanova ny fango]
Mampiana-janaka ny mponin'Ambositra. Misy sekoly maro ao Ambositra fa ny tena lehibe dia ny Lycée Saint Louis tantanan-dry Frera des Ecoles Chrétiennes, ny Lycée Saint Joseph de Cluny. Efa misy oniversite ihany koa ao Ambositra: ny Institut Supérieur Technologique Ambositra (+ Aumonérie Catholique Universitaire Ambositra). Eny Ankorombe no anofanana ireo Zandary rehetra miasa eto Madagasikara (EGNA).
Fivavahana ao Ambositra[hanova | hanova ny fango]
Ny finoana katôlika[hanova | hanova ny fango]
Mampalaza ny faritr'Ambositra ny finoana katôlika. Tonga nitondra ny Vaovao Mahafaly ireo misionera tonga voalohany.
Tamin'ny 15 Aogositra 1873 ny lamesa voalohany tao Amoron'i Mania (Sandrandahy) notarihin’I P. Delbosc, SI. Ny taona 1876 ny lamesa voalohany natao tao Ambositra. Tamin’ny 1886-1891 dia nankinina tamin’i P. Jacques Berthieu ny fandrindrana ny Misiona eran’ny faritra Ambositra. Tamin’io izy no nitondra manokana (Curé) tao Ambositra. Ary ny 1891 dia voatendry hifindra hiala an’Ambositra I P. Jacques Berthieu. Nahatsangana fiangonana miisa 15 izy tamin’izany. Nitambatra tamin’ny Diôsezin’i Fianarantsoa ihany Ambositra ny 14 Septambra 1955 – 3 Jona 1999.
Ny 3 Jona 1999 no teraka ho Diôsezy Ambositra. Mômpera Fulgence Rabemahafaly no voatendry ho Eveka hitantana azy voalohany. Nohamasinina tamin’ny 31 Oktôbra 1999 izy. Eveka faharoa sady mitondra ny Eglizin’Ambositra ny Mgr Fidélis Rakotonarivo, Zezoita, nanomboka ny taona 2005. Misy paroasy roa eo an-drenivohitra ary distrika 19 ambanivohitra. Ny isan’ny fiangonana rehetra dia mitontaly 542. Ny pretra miasa mivantana ao amin’ny diôsezy dia miisa 49. Ny isan’ny mponina rehetra ao amin’ny faritanin’ny diôsezy dia 844 792. Amin’io ny Katôlika dia ny 421 860. Ireo mandray ny eokaristia: 243 664. Ireo tena mpamonjy fiangonana alahady dia 164 743. Ny pretran’ny diôsezy ankehitriny dia efa miisa 72. Isan'ny ezaka tratrarin’ny Diôsezy ny ady amin’ny habadoana. Manampy ireo ny fikajiana ny tontolo iainana.
Manana ny Radio Maria Madagasikara itoriany ny Evanjely ny diôsezy. Ity onjampeo ity dia mifantoka amin’ny fanabeazam-pinoana sy ny fampisondrotana ny maha olona. Manana gazety manokana ifandraisana ny diosezy, dia ny Gazety Akon'ny Diôsezy Ambositra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambositra&oldid=997406"
Voaova farany tamin'ny 22 Septambra 2020 amin'ny 11:43 ity pejy ity.